स्वास्थ्यका लागि कति धेरै खतरनाक मोबाइल फोनको रेडिएसन ? - ज्ञानविज्ञान
मानिसको जीवनको अभिन्य अंग बनिसकेको मोबाइल फोनको रेडिएसनबारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ त ? मोबाइलको प्रयोगमा अभ्यस्त हुनेहरुले रेडिएसनबारेमा पनि ज्ञान राख्नु जरुरी छ |
यो रेडिएसन कयौँ किसिमको हुन्छ भने यसले नै मानिसलाई बिरामी पनि बनाउन सक्छ । आधुनिक जीवनशैलीमा मोबाइल फोन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने बस्तु भइसकेको छ। हामी मोबाइलबिना थोरे समय पनि रहन सक्दैनौँ । तर तपाईँले कहिले यी मोबाइल फोनबाट निकाल्ने रेडिएसनबारे जान्नु भएको छ ? जसले केवल वातावरणमा रहने पशुपंक्षी मात्रै होइन मानिसको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याउँछ ।
रेडिएसनबाट कसरी जोगिने ?
साधरणतया हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनमा एक विशेष प्रकारको तरङ्ग (इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसन) निक्लिन्छ । जसलाई आम जनजीवनका लागि हानिकारक मानिन्छ । मोबाइल रेडिएसनबाट मानसिक असर समेत कयौँ घातक बिरामी हुने आशंका गरिन्छ । यदि तपाईँ आफ्नो मोबाइल फोनको रेडिएसन थाहा पाउन चहानुहुन्छ भने यसका लागि मोबाइलबाट *#07# डायल गर्नु जरुरी हुन्छ ।
यो नम्बर डायल गरेपछि मोबाइलको स्क्रीनमा रेडिएसनसम्बन्धी जानकारी देख्न सकिन्छ । यसमा दुई किसिमबाट रेडिएसनको स्तर देखाइन्छ। एक ‘हेड’ र अर्को ‘बडी’। हेड अर्थात फोनमा कुराकानी गर्ने क्रममा मोबाइल रेडिएसनको स्तर के हो र बडी अर्थात् फोनको प्रयोग गर्ने क्रममा या गोजीमा राखेका बेला रेडिएसनको स्तर कति हुन्छ भन्ने यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
कति हुनुपर्छ मोबाइलको रेडिएसन ?
भारतको सञ्चार तथा सूचना प्रौद्योगिक मन्त्रालयको ‘स्पेसिफिक एब्जर्प्सन रेट’ (सार) का अनुसार कुनै पनि स्मार्टफोन, ट्याबलेट या अन्य स्मार्ट डिभाइसको रेडिएसन १.६ वाट प्रति किलोग्राम भन्दा माथि हुनुहुँदैन । शरीरबाट डिभाइसको १० मिलिमिटरको दूरीमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यदि फोनमा कुराकानी गरिरहँदा या गोजीमा राखेका बेला तपाईँको डिभाइसले रेडिएसनको यस सीमालाई पार गरेमा यो तपाईाको स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन्छ ।
के हो मोबाइल रेडिएसन ?
प्रविधि विशेषज्ञका अनुसार डिभाइसलाई रेडिएसनबाट पूर्णरुपमा मुक्त गर्न सकिँदैन । तर केही समयका लागि यसबाट जोगिन भने सकिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार फोनलाई चार्जमा राखेर कहिले पनि कुरा गर्नु हुँदैन। यसबेला मोबाइल रेडिएसन १० गुणासम्म बढ्न पुग्छ । सिग्नल कमजोर हुँदा या ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदा पनि कल गर्नु हुँदैन। यस क्रममा पनि रेडिएसन स्तर बढेको हुन्छ ।
चार्ज भएका बेला बोल्न आवश्यक परेका बेला ईयरफोन या हेडफोनको प्रयोग गर्नुस् । यसले शरीरमा रेडिएसनको असर कम पर्छ । मोबाइलको रेडिएसनको मानक अधिकतम १.६ वाट प्रतिकिलोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर नेपाली बजारमा कुनै अनुगमनबिना जस्ता पनि स्मार्टफोन भित्रिने क्रम जारी छ । रेडिएसनको स्तर मापन नगरी नै नेपालमा चीन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जुनसुकै मोबाइल फोन धमाधम आइरहेका छन् ।
Don't Miss it संसारकै ठुलो टेलिभिजन
Up Next अन्तरिक्ष स्टेशनमा पाँचतारे होटल खोल्दै छ रुस |
सन् २०१८ मा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास हुनेछ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नियाल्दा यो वर्षभित्रै प्रविधिले ठूलो…
यसरी स्याहार गरे बिग्रन्न छाला; जान्नुहोस्
पाँच दशकको उमेर कटिसकेपछि छालाको चमक कायम राख्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यो उमेरमा छालामा धेरै दाग देखिन थाल्छ ।…
यसरी प्रयोग गर्नुस कागतीलाई वास्तुदोष कम गर्न
– यदि रातको समयमा डरलाग्दो सपना देख्ने समस्या छ र निद्रा पनि लाग्दैन भने सिरानीमुनी एक दाना हरियो कागती राखेर…
अल्वर्ट आइन्स्टाइन एक सैद्धान्तिक भौतिकविद थिए । उनी १४ मार्च १८७९ मा जन्मे र १८ अप्रिल १९५५ मा उनको निधन…
तौल घटाउने नाममा गरिने ७ गल्ती १. पखलालाग्ने औषधि पाचनपक्रियामा गडबढी गरी बारम्बार शौचालयजाने विधि धेरैले प्रयोग गरेका हुन्छ ।…